တရားတော် mp3 free download | ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ၏ MP3. 2019-06-18
တရားတော် mp3 free download. Home ♫ 2019-06-18
တရားတော် mp3 free download Rating: 9,5/10 1572 reviews
နိုင်ပုံ တရားတော် Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 40 တောင်ကြီးလေးလုံးကြိတ်သည်ကို ခံနေကြရပုံ ခန္ဓာခေါ်ရာကို ဥာဏ်ကသွားရမည် ဓမ္မာနု ဓမ္မပဋိပတ္တိဖြစ်ရန်နှင့် ဖြစ်ပျက်နှင့်မဂ်ကိုက်ရန် ခန္ဓာဝန်ထမ်း ခရီးကြမ်းသွားပုံ အဓိပတိ၃ပါးထား၍ တရားအားထုတ်ရမည် အတ္တပြုတ်အောင်ရှုနည်း တေဇောဓတ်သေမင်းကြီးဖန်တီးနေပုံတရားတော် အနိစ္စ၊ ဒုက္ခွ၊အနတ္တ မြင်လျှင်လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ ကင်းစင်ကြောင်းသုတိမရဟန္ဆာတည်ပုံ ဘ၀ထူးကြီးကိုအလွဲသုံးစားမလုပ်ကြရန် ဘ၀ထူးကြီးကိုအလွဲသုံးစားမလုပ်ပဲ၊ ဒိဋ္ဌိခွာပြီးနိဗ္ဗန်ဝင်ရန် သဿတ၊ ဥစ္ဆေဒဖြုတ်နည်း၊ လောင်စာသိမ်း၍မီးငြိမ်းရန် Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 41 နားကတရားနာ ဥာဏ်ကခန္ဓာလှည့်ရန် ဒိဋ္ဌိအရင်ခွာရမည် ပုထုဇဉ်နှစ်မျိုးရှိနေပုံ ငကျိုး ငကန်းနှင့်ခရီးသွားပုံ သစ္စာသိဖို့အရေးကြီးပုံ ကိသုကောပမသုတ် ၁ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိရမည် ကိသုကောပမသုတ် ၂ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိရမည် အနိစ္စ၀တသင်္ခါရာတရားတော် ကိံသုကောပမသုတ်-၃ ကိသုကောပမသုတ်၊ ၀ိပဿနာရှုဖို့အကြိမ်ကြိမ်မှာခြင်း ပုထုဇဉ်ရဟန်းအမေး ရဟန္ဆာကြီးလေးပါး အဖြေ တရားနာခြင်းသည်ဆင်းရဲတွင်းမှကယ်တင်ခြင်းအလုပ်တရားတော် Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 42 ၀ီဏောပမသုတ်၊ စောင်းထဲမှာ အသံရှာပုံ မြုပ်လမ်း မျောလမ်းမှထွက်ကြရန် ဖြစ်ပျက်တစ်ခုပိုင်လျှင် အကုန်ပိုင်နိုင်ပုံ ၀ီဏောပမသုတ် မတင်းတိမ်ကောင်းသောတရားငါးပါး တရားတော် ခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားမလည်ရင် ဒိဋ္ဌိ၊၀ိစိကိစ္ဆာမပြုတ်ရေးတရားတော် ဆပ္ပါဏကောပမာသုတ် ၁ သားကောင်ခြောက်ကောင် ဥပမာ ၂ ပြုံးသေ၊မဲ. တေ၀ိဇ္ဇသုတ်၊ သန္ဒိဋ္ဌိကော ကိုယ်တိုင်မြင်ရန် ပင်ကိုယ်သဘောစွန့်တာသည် ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံ Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 43 သစ္စာမသိတာသည် ကြောက်စရာကောင်းပုံ မိလက္ခရဟန်းဥပမာပြ အမှောင်ငါးစင်း အလင်းငါးချက် ၁ အမှောင်ငါးစင်း အလင်းငါးချက် ၂ အမှောင်ငါးစင်း အလင်းငါးချက် ၃ အမှောင်ငါးစင်း အလင်းငါးချက် ၄ အမှောင်ငါးစင်း အလင်းငါးချက် ၅ သာတိရဟန်းဝထ္ထု ခန္ဓာငါးပါး ဒုက္ခသစ္စာ မသေရာ အမတနိဗ္ဗာန် ခန္ဓာငါးပါးမှ ဝေဒနာကိုခွဲ၍ဟောပုံ ခန္ဓာငါးပါးမှ စိတ်ကိုခွဲ၍ဟောပုံ သစ္စာသိမှနိဗ္ဗာန်ရပုံ တရားတော် Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 44 နှလုံးသွင်းမှန်မှနိဗ္ဗာန်ရပုံ တရားတော် တဏှာအပ်ချုပ်သမ ဥပမာပြ ၀ိဇ္ဇာနှင့်စရဏရှင်းတရားတော် သေခါနီးပေါ်တတ်သော ကုသိုလ် အကုသိုလ်စိတ်တရားတော် မဟာနာမသုတ်၊ သေခါနီးဇော ၅ တန်တရားတော် ဣန္ဒြိယဘာဝနာသုတ် ၁ ဣန္ဒြိယဘာဝနာသုတ် ၂ ဣန္ဒြိယဘာဝနာသုတ် ၃ ဘုရားအကြိုက်ဆုံးပူဇော်နည်း ၁ ၀ိပ္ပလ္လာသ တရားတော် ၁ ၀ိပ္ပလ္လာသ တရားတော် ၂ ကံပေါ်ကို ၀ိပ္ပလ္လာသ ၁၂ ပါးအုပ်ချုပ်ပုံ Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 45 လှေဥပမာပြ၊ ၀ိပ္ပလ္လာသ တရားတော် ၀ိပဿနာအလုပ်သည်တောထဲမှကျားသစ်၊ကျားတို့ကဲ့သို့စောင့်ဖမ်းရန် ကာလ၊မရဏတို့၏စားဖတ်ဝါးဖတ်မဖြစ်စေရေး ပထမနိဗ္ဗာန်ရချင်လျှင် ဒိဋ္ဌိရှေ့ထားဖြုတ်ရမည် ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးဖြုတ်ပုံနှင့် အပယ်သွားမည့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဖြတ်ပေးပုံ နိဗ္ဗာန်သည် ကံနှင့်ဆက်သွယ်။ အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၏ပစ္စည်း သစ္စာသိဖို့အရေးကြီးဆုံး ကိစ္စဥာဏ် ယမကရဟန်းဝထ္ထု ဥစ္ဆေဒ ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရေး တရားတော် ယမကရဟန်းဝထ္ထု ၂ ခန္ဓာငါးပါး သူသတ်ယောကျာင်္း ၀ဋ်ကျွတ် ကံဖြတ် တရားတော် Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 46? ရှာမှီးခြင်းမတူညီကြပုံ သာရောပမသုတ်တရားတော် ၁ Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 8 မဓုပဏ္ဍိတသုတ် တရားတော် ၁ မဓုပဏ္ဍိတသုတ် တရားတော် ၂ ဒွေးဓါဝိတက္ကသုတ် တရားတော် ၂ တဏှာသင်္ခယသုတ် သင်္ခတနှင့်အင်္ခတရှင်းတရားတော အနာထပိဏ္ဍိကသုတ်တရားတော် ရောဟိတဿသုတ်တရားတော် သ္ဂဗြဟ္မသုတ္တန်တရားတော် ၁ Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc9ဆန္ဒသုတ် ၃ နန္ဒေကောဝါဒသုတ် Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 10 သမထမလို ဝိပဿနာနဲ. သေတရားတော် ရှင်ခေမကနှင့်ရဟန်ကြီး ၆၀ တို့ ရဟန္ဓာဖြစ်ကြပုံ? မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံတရားတော် ဒုမ္မိတ္တောကြောင့် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံတရားတော် ပရိတောဂေါသောကြောင့် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံတရားတော် အရွယ်သုံးပါးတစ်ပါးပါးတွင် တရားအားထုတ်ပါတရားတော် Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 17 ကံ၊စေတနာ ကမ္မ၀ါဒီသဿတ ဒိဋ္ဌိပယ်ပုံ မာလုကျပုတ္တ ဥပမာပြစုတိပဋိသန္ဓေတရားတော် စုတိ ပဋိန္ဓေနိဗ္ဗာန် ရောက်ကြောင်းတရားတော် ဂီလာန ရဟန်းအား ဝေဒနာပြ၍ ဟောကြားပုံ တရားတော် အ၀ိဇ္ဇာ၊ တဏှာ နှစ်ဘက်တန်းနေပုံ တရား တဏှာအပ်ချုပ်သမား ဥပမာပြ ၁ တဏှာအပ်ချုပ်သမား ဥပမာပြ ၂ ရှင်နန္ဒကဘိက္ခုနီမ ငါးရာအား မီးအလင်းဖြင့်ဥပမာပြပုံ ရှင်နန္ဒကဘိက္ခုနီမ ငါးရာအားသစ်ပင်ဖြင့် ဥပမာပြပုံ အာသဝေါတရားလေးပါး တရားတော် ၀ဲသြဃ တရားတော် Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 18 ကံခြောက်မျိုး တရားတော် ဒုက္ခခြောက်မျိုး တရားတော် ကာမခြောက်မျိုး တရားတော် ဝေဒနာခြောက်မျိုး တရားတော် ဥာဏ်သုံးဆင့်တက်ပုံနှင့် အလုပ်စဉ်ပြတရား ဥတ္တရလုလင်ဥပမာပြ၊ ၀ိပဿနာအားထုတ်နည်း လူမိုက်နှင့် လူလိမ္မာခွဲခြားပုံ သောတာပန်တည်နည်း တရားတော် အသိလိုက်ရန်တရားတော် ဒီခန္ဓာပစ်ချပြီးနောက် နောက်ခန္ဓာမရတာ အကောင်းဆုံးတရားတော် Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 19 ဝေဒနာ အနိစ္စတရားတော် ဝေဒနာသုံးပါး ၁ စရိုက်ရွေးချယ်ပုံ ဝေဒနာသုံးပါး ၂ ကိုယ့်အသေကိုယ်ကြည့်ရန် သင်္ခါရတရား၊ အနိစ္စပေါ်အောင်ကြည့်ရန် မဂ်ဥာဏ်လိုချင်လျှင် ၀ိပဿနာအားထုတ်ပါ သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်၏ မြင်ပုံ တရားတော် ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှ နိဗ္ဗာန်မြင်မည် ဒိဋ္ဌိသတ်လျှင် သောတာပန်တည်သည် မဟာပုဏ္ဏမသုတ်တရားတော် ကံသည် အနတ္တသဘောဖြစ်ပုံ Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 20 လူမိုက်နှင့် လူမိုက်ထက် ပိုမိုက်သောသူတရား ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းနှင့်အကျိုးတရားနာနေကြပုံ မဂ္ဂဗြဟ္မစရိယအကျင့် လူမိုက်လမ်းဖြတ်ရန် လူမိုက်နှင့် လူလိမ္မာခွဲခြားပုံ အရှင်ခေမကဥပမာပြ၊ ငါဟူသောသက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရန် အရှင်ခေမကဥပမာပြ ၂ ၊ အနိစ္စနှင့်အနိစ္စလက္ခဏာ အိပ်ခြင်းမှနိုးပြီး မဂ္ဂင်ဖောင်ကိုပြင်ဆင်ကြရန် ၀ိပဿနာလမ်းနှင့် နိဗ္ဗာန်သို့သွားနိုင်ပုံ တရားတော် သုသိမပရိဗိုဇ် တရားခိုးခန်း ၁ သုသိမပရိဗိုဇ် တရားခိုးခန်း ၂ Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 21 အသက်တိုခြင်း၊ရောဂါများခြင်းအကြောင်းတရား၊သက္ကပသဉ္စသုတ် ၁ သုသိမပရိဗိုဇ် ရဟန္တာဖြစ်ပုံ အနိစ္စရှု၊ အနိစ္စမှတ်၊အနိစ္စသိ ကျင့်စဉ် ခဏကောင်းကို မလွန်မိပါစေနှင့် တရား အဂ္ဂိဝစ္ဆပုဏ္ဏားအား နိဗ္ဗာန်အကြောင်းရှင်းပြပုံ တရား ချည်တိုင်နှင့်ကြိုး၊ ခွေးနှင့်လည်ပတ် တရားတော် အဂ္ဂိဝစ္ဆပုဏ္ဏားအား မီးနှင့်ဥပမာပြပုံ သစ္စာနှစ်ပါး တရားတော် အားကိုးထိုက်သောမဂ္ဂင်ဖောင်ကိုဖွဲ့ထားရန် တရား ရှင်သာရိပုတ္တရာက အနာထပိဏ်သူဋ္ဌေးအား ဖြစ်ပျက်ရှုနည်းသင်ပေးပုံ Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 22 မဟာပုဏ္ဏမသုတ်တရားတော် ၂ ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးမှ ၀ိပဿနာရှုပါ တရားတော် သေနာပေါ်၍သေသည်တရားတော် ၀ိမုတ္တာယတနသုတ် ကမ္မ၀ါဒီသဿတဒိဋ္ဌိတရားတော် ဖြစ်ပျက်နှင့်မဂ်မှာ ကိလေသာကြားမခိုပါစေနှင့် တရား ရှင်ဆန္ဒဥပမာပြ၊ ဝေဒနာနှင့်အသက်ရှင်နေပုံ ရှင်ဆန္ဒရဟန်းအား ဒိဋ္ဌိခွာခန်း ၁ ရှင်ဆန္ဒရဟန်းအား ဒိဋ္ဌိခွာခန်း ၂ ရှင်ဆန္ဒ ဒိဋ္ဌိ ၀ိစိကိစ္ဆာကွာပြီး ရဟန္တာဖြစ်ပုံတရားတော် နေချိန်မှာ သေချိန်မနှုတ်နဲ့ မဂ္ဂဗြဟ္မစရိယ ကျင့်ရန်တိုက်တွန်း တရားတော် ခန္ဓာကပြောတာ စောင့်ကြည့်ပါ မျောက်ဥပမာပြ Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 23 လူမိုက်နှင့် လူလိမ္မာ တရားတော် ဗာလပဏ္ဍိတသုတ် တရားတော် သူတောင်းစားခြောက်ယောက် ဥပမာပြ တရားတော် ဒိဋ္ဌိကိလေသာသတ်ရန် တရားတော် သမ္မာဒိဋ္ဌိငါးမျိုး တရား ၁ သမ္မာဒိဋ္ဌိငါးမျိုး တရား ၂ သမ္မာဒိဋ္ဌိငါးမျိုး တရား ၃ သမ္မာဒိဋ္ဌိငါးမျိုး တရား ၄ နိဗ္ဗာန်သည်ဆုတောင်း၍မရနိူင်ပုံ ဖဂ္ဂုဏရဟန်းဥပမာပြ ခန္ဓာကြီးကသေရွာသို့သွားနေပုံ အိုသံကြားသည်နှင်. ရပါကြောင်း နိဗ္မာန် အကျိုးမျှော် နိုးဆော် အပ်ပါကြောင်း. .
Myanmar Myittar Pot Songdat Mp3 [4.82 MB]
သာသနဓဇ။ သဒ္ဓမ္မနေပုည။ သာသနဇောတိပါလ ဓမ္မာစရိယ။ ဓမ္မကထိက ဗဟုဇနဟိတဓရ ဓမ္မဒူတ ဒေါက်တာအရှင် ဆေကိန္ဒ ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ တရား အခွေ ၇၈ ခွေ ဒေါက်တာအရှင်ပညိဿရ ဓမ္မဒူတတောရ သာသနာရိပ်သာ ဆယ်မိုင်ကုန်း ၊ ပဲခူးမြို့. မိုးကုတ်ဝိပဿနာ ဇနိတရာမကျောင်းတိုက် ပဓာနနာယက အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ ဘဒ္ဒန္ဘဇနိတာလင်္ကာရဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ အနောက်ဂန့်ဂေါ မုံလယ်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ သံဝရ ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဥပနိသရခံ မိုးကုတ်ဝိပဿနာတရားစဉ်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ပြန့်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီး၏ နာယက ထူးကြီးဆရာတော် ဦးဣန္ဒာဝုဓာဘိဝံသ ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ. ကံဖြတ်၊ တဏှာဖြတ်၊ ၀ဋ်ဖြတ် ကံကိုဥာဏ်နှင့်ဆက်မှလွတ်မည် တရားတော် တဏှာ၊ ဥပါဒါန် ကံဖြတ် ကိုယ့်ခန္ဓာသုံးသပ်ပုံ တရားတော် ၀ိပ္ပလ္လာသတံတိုင်းအတွင်းမှောင်ကျနေပုံ ၀ိပ္ပလ္လာသ ၁၂ ပါးအကြောင်း မဂ်မှတပါး ကယ်မည့်သူမရှိနိုင်ပုံ နိဗ္ဗာန်သို. အန္တီမ အဂ္ဂိဈာပနပူဇာ Video မှတ်တမ်း မှ. တူပုံ သြပနယျိကော တရားတော် ၁ သြပနယျိကော တရားတော် ၂ သမ္မသနသုတ် ကိုယ်. အလုပ်ပေးတရားတော် ၀ိပဿနာအလုပ်ပေးတရားတော် ဒိဋ္ဌိ ၀ိစိကိစ္ဆာ ပယ်ပုံတရားတော် ဣသနှင့်မစ္ဆရိယရှင်းပုံသက္ကပဥာသုတ်အမှတ် ၃ သက္ကပဥှာသုတ် ၄ ၀ိတက်ရှုနည်း နိသျှည်း ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆက်ပုံတရားတော် အဂ္ဂိဝစ္ဆသုတ် ဒုလ္လဘတရားငါးပါး ဒိဋ္ဌိတွေအမေး အနာထပိဏ်သူဋ္ဌေးအဖြေ အ၀ိဇ္ဇာ၊သင်္ခါရတရားတော် Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 30 ဖဂ္ဂုဏရဟန်းဥပမာပြ သေတတ်အောင်သေနည်း တေ၀ိဇ္ဇသုတ်တရားတော် ရှာမှီးခြင်းမလွဲကြရန် အနာထပိဏ္ဍိကောဝါဒသုတ် ရှင်ယမက ဥပမာပြ ၁ ဒုက္ခပျောက်ဆေး မဂ်ရေအေး ရှင်ယမက ဥပမာပြ ၂ ရှေ့နောက်ခွဲကြရန် သဗ္ဗေသင်္ခါရာ အနိစ္စာ စေတနာ ကံ သင်္ခါရတရားတော် အစေလကကဿဖ ဥပမာပြ ၁ ဆရာ့တာဝန်နှင့် ဒကာ့တာဝန် အစေလကကဿဖ ဥပမာပြ ၂ ဒုက္ခလာပုံ အမေး၊အဖြေ Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 31 သုတ၀ါနှင့် အသုတ၀ါ ကွာခြားပုံ ကိုယ်. We are offeringapopular internet based search platform for everybody, from large businesses to individuals, who is interested in mp3 files.
Click on the best suggestion or enter the full name of the download you are searching for and hit the return key on your device or press the search button next to the search input field. You can search comfortable for every mp3 file you want by entering it into the search field on top of this page. Give usatry by finding your searched music with our search engine. တရားတော် လောင်စာနှင့်မီးတွဲနေပုံ တရားတော် အားကိုးမှား၍ပရိဒေ၀မချူပ်တည်းနိူင်ပုံ တရားတော် ကတင်ညုတ ကတဒေ၀ီကို ပြုသင့်ချိန် မပြုသင့်ချိန်ခွဲခြားသိရန်တရားတော် မဟာဒုက္ခွက္ခွခန္ဓာသုတ် ၁ အနှစ်ထမ်းကြအောင်ကြိုးစားရန် စူဠသာရောပမသုတ် ခန္ဓာကြီး၏သွားနေကြလမ်းစဉ် ဥာဏ်အမြင်အနတ္တတွေ့ပါမှ အတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်မည် ၁ Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 64 ဥာဏ်အမြင်အနတ္တတွေ့ပါမှ အတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်မည် ၂ မှီဝဲရမည့်တရားကိုမှီဝဲပါတရားတော် ကံလေးမျိုးတရားတော် သေနိယနှင့်ပုဏ္ဏချွှတ်ခန်း ၁ နိဗ္ဗာန်အကြောင်း အဂ္ဂိဝစ္စသုတ် ညအလုပ်ပေး တရားတော် တဏှာမာနချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဘယ်သွားသတုန်း ကံကိုအတ္တစွဲလမ်းထားကြပုံ တရားတော် ငရဲမီးငြိမ်းသတ်နည်း ချို့ယွင်းချက်သုံးမျိုးဖြစ်ခဲ့လျှင် တရားထူးမရနိုင်ပုံ ခန္ဓာစွဲလမ်းမှုကြောင့် တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဖြစ်ရပုံ ဒိဋ္ဌိမသေရင်သံသရာလည်မည် တရားတော် မွေးကတည်းကခန္ဓာကြီးမှာ အိုနာသေဘေးခရီးသို့ပြေးနေပုံ လူမိုက်နှင့်လူလ်ိမ္မာ ထူခြားပုံ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌ စီစစ်သုံးသပ်ရန် နှလုံးသွင်းမှန်မှ နိဗ္ဗာန်ရမည် အနာထပိဏ်သူဌေးကြီး နောက်ဆုံးနာကြားရသော တရားတော် အစ အနာထပိဏ်သူဌေးကြီး နောက်ဆုံးနာကြားရသော တရားတော် အဆုံး Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 65 ဆန္ဒောဝါဒသုတ် ၁ ဆန္ဒောဝါဒသုတ် ၂ ဣန္ဒြိယဘာဝနာသုတ် ၁ ဣန္ဒြိယဘာဝနာသုတ် ၂ အစေလကဿဖဥပမာပြ သဿတ ဥစ္စေဒဖြုတ်ရေး အနုရုဒ္ဓါသုတ် မဂ်ဖိုလ်တားသည့်တရားသုံးခု လောကသုံးပါးကိုခွဲခြားသိရန် တရားတော် တဏှာမာန အရင်းခံ၍မဂ်ဖိုလ်သို့တက်လှမ်းပုံ ပြုံးသေနှင့်မဲ့သေ တရားတော် သံသရာချဲ့သည့်တရားနှင့် သံသရာစခန်းသတ်သည့်တရား နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လျှင် ၀ိဇ္ဇာနှင့်စရဏဖြစ်အောင်လုပ်ရန် ရှင်ဆန္ဒဥပမာပြ တဏှာကသခင် ခန္ဓာကကျွန် တရားတော် Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 66 ပထမနိဗ္ဗာန်ကိုကန့်ကွက်သည့် ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးဖြုတ်ပေးပုံ ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တရားတော် အစေလကဿဖ၀ထ္ထု ဥာဏ်နှစ်ဥာဏ်ထဲနှင့် အရိယာဖြစ်နှင့်ပုံ ပညတ်ပရမတ်ကွဲဖို့ တရားနာကြပုံ အပယ်စိတ်ချရတာလုပ်ပြီးမှ ပျော်ချင်ပျော်ကြပါ ဒိဋ္ဌိဝိစိကိစ္ဆာဖြုတ်နည်း ၁ ဒိဋ္ဌိဝိစိကိစ္ဆာဖြုတ်နည်း ၂ ၀ိညာဉ်ပြောင်းဟုယူလျှင် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားတော် ၃ အာစယဂါမိနောဓမ္မာနှင့် အပစယဂါမိနောဓမ္မော ပဉ္စနန္တရိယကံထက် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံကပို၍ကြောက်စရာကောင်းပုံ ၁ ပဉ္စနန္တရိယကံထက် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံကပို၍ကြောက်စရာကောင်းပုံ ၂ ကိလေသာအစေး မပယ်နိုင်သေးလျှင် ချမ်းသာမရှိနိုင်ပုံ တရားတော် Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 67 သစ္စာလေးပါးပြတရားတော် ပပဉ္စနှင့် နိပ္ပပဉ္စဖြစ်ပုံပြ ဓမ္မစီမံသည့်အတိုင်းဖြစ်နေကြပုံ ရှင်မဟာကောဋိကနှင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာအမေးအဖြေ ၀ိဇ္ဇာနှင့်စရဏတရားတော် လူ့ဘ၀ရခိုက်မှာဝဋ်သုံးပါးမှ လွတ်အောင်ကြိုးစားရမည်။ ဇာတိ ဇရာ မရဏ ဒုက္ခသစ္စာမြင်အောင်ရှုကြရန် ကံရှုံးတာထက်ဥာဏ်ရှုံးတာ အနာဆုံးတရားတော် စိတ္တာနုပဿနာတရားတော် လောင်စာသိမ်း၍မီးငြိမ်းရန်တရားတော် တဏှာကိုပါယ်ခြင်းသည် ဘုရား၏၀ါဒဖြစ်ပုံ ဥာဏ်ကမှနိဗ္ဗာန်ပို့နိုင်ပုံ တရားတော် လှူပုံလှူနည်းသင်ပေးပုံ ကုသိုလ်ခွေး အကုသိုလ်ခွေး တရားတော် Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 68 သာသနာနှင့်ဆရာကောင်းတွေ့ခိုက်မှာလုံ့လစိုက်ကြရန် မဂ္ဂဗြဟ္မစရိယကျင့်ရန်တရားတော် ဗာလပဏ္ဍိတသုတ် မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးမှ နိဗ္ဗာန်သို့ပို့နိုင်ပုံ သစ္စာလေးပါး တရားတော် တရားသိမှဘုရားသိသည်တရားတော် ဗာလပဏ္ဍိတသုတ် တရားတော် ၁ ဗာလပဏ္ဍိတသုတ် ၂ သောတာပန်တည်တဲ့တရားတော် ခန္ဓာရှိနေလျှင်အိုနာသေဘေးတို့မှ မလွတ်နိုင်ပုံ ည အလုပ်ပေးတရား ပရမ်းပတာဘေးမှကင်းလွတ်ရေးတရားတော် သစ္စာဆိုတာခန္ဓာမှာရှိပုံ အာရောဂျံ ပရမံလာဘံနိဗ္ဗာနံသုခံ တရားတော် Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 69 ရှင်နာဂသိန်က မိလိန္ဒမင်းကြီးအားဟောကြားသောတရားတော် ၀ိပဿနာမဂ်နှင့် လောကုတ္တရာမဂ် စိတ် ၁၄ မျိုး စိတ္တနုပဿနာရှုပွားနည်း ခန္ဓာ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော် ခန္ဓာကိုယ် သစ္စာမျက်လုံးတပ်ကြည့်ရမည် အဖုံးနှစ်ချပ်ဖွင့်မှ နိဗ္ဗာန်မြင်ရပုံ မဂ်တု ၁၀ ပါးနှင့် သလ္လေခသုတ် တရာတော် သာသနာတွင်းတရားနှင့် သာသနာပတရား ကွာခြားပုံ အနုမောဓဥာဏ်နှင့် ပဋိဝေဓဥာဏ် တရားတော် အပေါင်းအသင်းမလွဲကြစေရန် တရာတော် ရုပ်နာမ်သည်အမြဲမရှိ ဆင်းရဲရှိ၏။ နိဗ္ဗာန်သည် ဆင်းရဲမရှိ အမြဲရှိ၏။ သမ္မာဒိဋ္ဌိနှစ်မျိုးအကြောင်း Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 70 အ၀ိဇ္ဇာက ၀ိဇ္ဇာဖြစ်အောင်လုပ်နည်း ၀ိပဿနာအလုပ်ကိုမလုပ်လျှင် နိဗ္ဗာန်မရှိနိုင်ပုံ သစ္စာသိဖို့အရေးကြီးပုံ နိဗ္ဗာန်ရချင်ရင်ခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာဒုက္ခွသစ္စာသိအောင်လုပ်ပါတရားတော် ဒိဋ္ဌိနှင့်တဏှာတွင် ဒိဋ္ဌိကပို၍ ကြောက်စရာကောင်းပုံ သစ္စာမသိတာသည်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပုံ ကိလေသာစင်ရန် ကိစ္စဥာဏ် ကတဥာဏ် ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးဖြင့်ဝေဖန်ဟောကြားခြင်းတရားတော် သစ္စာအကြောင်း တရားတော် ယနေ့အရေးကြီးဆုံးတရားတော် ကိစ္စဥာဏ် ပိဠနဋ္ဌောသဘော သစ္စဥာဏ် သင်္ခတဌောသဘော Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 71 ကိစ္စဥာဏ် သန္တပဋ္ဌသဘော ဥာဏ်စဉ်သုံးပါး မဟာပရိဠာဟငရဲအကြောင်း ကောသမ္ဗိယသုတ် မဟာပစ္စဝေက္ခဏာ ၇ ချက် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နှင့် စိတ္တာနုပဿနာ သစ္စာသိဖို့အရေးကြီးပုံ နံနက် သစ္စဥာဏ် ကစ္စဥာဏ် ကတဥာဏ် သုံးပါး ၁ သစ္စဥာဏ် ကစ္စဥာဏ် ကတဥာဏ် သုံးပါး ၂ အရှင်ကောဏ္ဍည သောတာပန်တည်ပုံ နံနက် သစ္စဥာဏ် ကစ္စဥာဏ် ကတဥာဏ် သုံးပါး ၃ သစ္စာသိဖို့အရေးကြီးပုံ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော် သစ္စာမသိသေးလျှင်ံနိဗ္ဗာန်မရှိသေး နံနက် Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 72 နိဗ္ဗာန်အကြောင်းရှင်းပြပုံ သစ္စာနှင့်ကံလေးပါး တရား ၁ သစ္စာနှင့်ကံလေးပါး တရား ၂ နံနက် လောင်စာသိမ်၍ မီးငြိမ်းရာ နိဗ္ဗာန် ည အာသ၀၀င်ရိုးချိုးရန် တရားတော် ကိုယ်အရေးကိုယ်သိကြရန်တရားတော် ဦးကြွယ်+ဒေါ်သန်းတို့၏ရွှေဂူကြီးဘုရားပြုပြင်အလှူရေစက်ချ သူတစ်ပါးအရေးထက်ကိုယ်အရေးကိုယ်ကြည်. Businesses benefit from our service by searching free music to use it in marketing videos or business presentations. တရားတော် ဒုက္ခွကိုပိုင်းခြားသိရှိကြရန် ၀ိပဿနာရှုသောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏မှတ်တိုင်တရား ၀ိတက် ၀ိစာရ ရှုနည်း ဆီခွက်မဖိတ်တရားတော် ဓမ္မနှင့် အနုဓမ္မရှင်း တရားတော် ဆင်သေနှင့် ကျီးမိုက် တရားတော် အရိန္တမနှင့် သောနက၀ထ္ထု နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လျှင် ကိုယ်စိတ်ကို ရှုမှတ်ကြပါ ၁ နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လျှင် ကိုယ်စိတ်ကို ရှုမှတ်ကြပါ ၂ မီးရထား ဘူတာစဉ် ဥပမာပြ အဘိဏှသုတ် ၀ိပဿနာယောဂီလေးမျိုး တရားတော် Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc4နကုလမာတာ နကုလပီတာ ဥပမာပြ တရားတော် ၁ နကုလမာတာ နကုလပီတာ ဥပမာပြ တရားတော် ၂ ပသာဒစက္ခု ဥာဏစက္ခု အလုပ်ပေးတရားတော် ဝေဒနာနုပဿနာ သတိပဌာန် ဒုက္ခသစ္စာအနက်မှ ပိဠနဌော တရားတော် ၁ ဒုက္ခသစ္စာအနက်မှ သင်္ခတဌော တရားတော် ၂ ဒုက္ခသစ္စာအနက်မှ သန္တာပဌော တရားတော် ၃ ဒုက္ခသစ္စာအနက်မှ ၀ိပရိနာမဌော တရားတော် ၄ Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc5သမုဒယ သစ္စာအနက်မှ အာယုဟနဌော တရားတော် ၁ သမုဒယ သစ္စာအနက်မှ နိဒါနဌော တရားတော် ၂ သမုဒယ သစ္စာအနက်မှ သံယောဂဌော တရားတော် ၃ သမုဒယ သစ္စာအနက်မှ ဗလိဗောဓဌော တရားတော် ၄ နိရောဓ သစ္စာအနက်မှ နိဿရဏဌော တရားတော် ၁ နိရောဓ သစ္စာအနက်မှ ၀ိဝေကဌော တရားတော် ၂ ယမကရဟန်း ဥပမာပြ နိရောဓ သစ္စာအနက်မှ အသင်္ခတဌော တရားတော် ၃ Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc6အဂ္ဂိဝစ္ဆ ပုဏ္ဏား ဥပမာပြတရားတော် နိရောဓ သစ္စာအနက်မှ အမတဌော တရားတော် ၄ မဂ္ဂသစ္စာအနက်မှ နိယျာနဌော တရားတော် ၁ မဂ္ဂသစ္စာအနက်မှ ဟေတွတ်ဌော တရားတော် ၂ မဂ္ဂသစ္စာအနက်မှ ဒဿနဌော တရားတော် ၃ မဂ္ဂသစ္စာအနက်မှ အဓိပတေယျ တရားတော် ၄ မဂ္ဂသစ္စာအနက်မှ အဓိပတေယျ တရားတော် ၅ ငါစွဲသူစွဲ အစွဲ နှစ်ပါးဖြုတ်ပေးပုံ တရားတော်၊ မှန်ကြည့်သူနှင့် အရိပ်ပမာ Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc7ကံလေးမျိုးတရားတော် သေနိယနှင့်ဏ္ဏ ဘုရားပြောသော စကားနှစ်ခွန်းတရားတော် ရှင်ခေမကနှင့် ရဟန်းကြီး ၆၀ ဥပမာပြတရားတော် ၀က္ကလိ ရဟန်းဝထ္ထု တရားတော် ၁ ၀က္ကလိ ရဟန်းဝထ္ထု တရားတော် ၂ ရှင်ဒဿဇိ ရဟန်းဝထ္ထု တရားတော် ၁ ကိံသုကောပမသုတ် ပုထုဇဉ်နှင့် အရိယာတို.
If you need help by using our service, read our instruction here. စားတတ်ပုံ တရားခြောက်မျိုးရှင်း မိလိန္ဒမင်းကြီးနှင့်အရှင်နာဂသိန်အမေးအဖြေ သေနည်းသင်ပေးပုံတရားတော် ကုက္ကုစ္စက လှည်. For example an individual user may use this search engine to find free music for his vacation photos to share them inavideo with all participants. နိုင်ငံခြား သားတွေကို English လို ဟောသော တရားခွေ များကို ဓမ္မ ဒါန ပြုလိုသူများ. .
အရှင်ဇောတိ (နံ့သာနီ): “သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး”၏ MP3
. လူပုဂ္ဂိလ် ဟော မှ ကျွတ်မှာလား ဆိုတာ မသိနိုင်ပါဘူး. တစ်ဘ၀ သာသနာ ကျမ်းပြု ဆရာတော် အရှင်ဃောသိတ မထေရ်မြတ်၏ ရုပ်ကလပ်တော်မှ မီးမခပဲကြွင်းကျန်ရစ်သော မျက်လုံးတော်၊ နှလုံးတော်၊ ချိတ်ဆက်နေသော အရိုးတော် နှင့် အခြားအရိုးတော်များ ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်. စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး၊ ကမ္ဘာ့ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် အဓိပတိ မဟာဓမ္မကထိက ဗဟုဇနဟိတဓရ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဒမ္မဇောတိကဓဇအဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ အရှင်ဦးဥာဏိဿရ ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ တရား တော် အခွေ ၄၅ ခွေနှင်. .
Start searching for your mp3 download by entering the name, orapart of it, into the input field on top of every page. စားတတ်ပုံ နိဗ္ဗာန် — အဂ္ဂိဝစ္စပုဏ္ဏားမေး၍ ဘုရားဖြေတော်မူပုံ ၁ နိဗ္ဗာန် — အဂ္ဂိဝစ္စပုဏ္ဏားမေး၍ ဘုရားဖြေတော်မူပုံ ၂ ညဏ်စဉ်သုံးပါးတရားတော် ယမကရဟန်းဥပမာပြ ၁ တရားတော် Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 15 ယမကရဟန်းဥပမာပြ ၂ တရားတော် ယမကရဟန်းဥပမာပြ ၃ တရားတော် ယမကရဟန်းဥပမာပြ ၄ တရားတော် ယမကရဟန်းဥပမာပြ ၅ တရားတော် ယမကရဟန်းဥပမာပြ ၇ တရားတော် ရှင်သာရိပုတ္တရာက ယမကရဟန်းအားတရားစစ်ပုံ ၈ မာဂဏ္ဍီသုတ် ၁ ဒိဌိရောဂါသည်ကြီး မာဂဏ္ဏီအား ဘုရားဟောကြားပုံတရားတော် အလုပ်ကင်းလျှင် အရူးကျန်တယ် တရားတော် ရုပ်နာမ်ကိုပညာနဲ. မိုးညှင်း ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ ကျေူဇူးတော်ရှင် ဓမ္မာနုပဿနာ ပခုက္ကူ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တ ဣန္ဒောဘာသ အနိစ္စ ဆရာတော် ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ တရားတော် အပုဒ်ရေ ၃၀၀ နီးပါး. ပုံတရားတော် ကိစ္စဥာဏ်တရားတော် သုဗြဟ္မနတ်သားတရားတော် Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 14 နှလုံးသွင်းမှန်မှုအရေးကြီးပုံ ထိုးထွင်းသိရမှာကိုထိုးထွင်းသိ ပိုင်းခြားသိရမှာကိုပိုင်းခြားသိတရားတော် ဝိပဿနာရှုပွားနည်းအလုပ်သင်တရားတော် ထိနမိဒ္ဓ၏ ကောက်ကျစ်လှည်. . ဆရာတော်ဦးဃောသိတ အဂ္ဂမဟာ ကမ္မဋ္ဌာနာ စရိယ သာသနဓဇ သီရိပ၀ရ ဓမ္မာစရိယ မိုးကုတ်ဝိပဿနာအဖွဲ့ချုပ်ပဓာန နာယက ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ စကားချပ်. ၀ိပဿနာ တရားတော် အဓိပတိ၃ပါးထား၍ အားထုတ်ကြပုံ တရားတော် လောင်စာသိမ်း၍ မီးငြိမ်းရန်တရားတော် ဝေပုလ္လတောင်ထောက်ပြ၍ အသေဇာတ်သိမ်းရန်။ အ၀ိဇ္ဇာဖုံးပုံနှင့် စုတိသုံးမျိုး Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 12 အိုနာသေလွတ်ရာ နိဗ္ဗာန် တရားတော်၊နာဂရသုတ် သမ္မသနသုတ် အငတ်နာဘေးတရားတော် ကာလ၏ စားဖတ် ဝါးဖတ်မဖြစ်စေရေးတရားတော် သီလလုံခြုံရုံနှင့် မတင်းတိမ်ပါနဲ့ သလ္လနှင့် အဘယဟော — သစ်တုံးဥပမာ အင်္ဂါလေးပါးပြည့်စုံလျှင် ဒုတိယဘ၀မှာ ကိစ္စပြီးပုံတရားတော် သောတာ နုဂတသုတ် ဒုလ္လဘတရား ၅-ပါး ဘုရားဟော ၅-ချက် နှင့် ပြည့်စုံလျှင် အမှန်ပင်မဂ်ဆိုက်နိုင်ပုံ ရှင်ဆန္ဒ ဒါးလှီး ဝတ္ထု သောတာပန်တည်ခြင်းအကြောင်းတရားတော် နီဝရဏတရားငါးပါးတရားတော် ၁ နီဝရဏတရားငါးပါးတရားတော် ၂ Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 13 နီဝရဏတရားငါးပါးတရားတော် ၃ ၊အဇာတသတ်ဟော သမုဒ္ဓရာခြောက်စင်းကိုဒုက္ခွသစ္စာအဖြစ်ဥပမာပြတရားတော် ခန္ဓာ ပဋိစသမုပ္ပါဒ် ရဟတ်လည်နေပုံတရားတော် ဒုက္ခွသစ္စာကိုပိုင်နိုင်စွာမသိသေးလျှင်သံသရာထဲလည်ဦးမည်တရားတော် ဒုက္ခွပေါ်ဒုက္ခွဆင့်နေပုံတရားတော် ဒုက္ခွသစ္စာကိုရှုသောပဂ္ဂိုလ်တို့၏ ဉာဏ်၌ထင်မြင်ပုံတရားတော် ဒုက္ခွသစ္စာ၏ ဆိုးဝါးမှုကိုရှင်းပြပုံတရားတော် သောတာပန်ဖြစ်ဖို့ နှစ်ချက်တရားတော် ပဋိဝေဓအသိရောက်မှကိစ္စပြီးနှိုင်ပုံ သစ္စညဏ်မရခဲ.
ကွာခြားပုံတရားတော် သုခနှင့်ဒုက္ခ ပုရိဗုဇ်အမေး ရှင်သာရိပုတ္တရာအဖြေ သုတ၀ါအရိယာ သာဝကအဖြစ်မှ ဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြောင်း သုဂတိမှ နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့နည်းတရားတော် Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 51 ပဉ္စနန္တရိယကံမှလွဲလျှင် ၀ိပဿနာကုသိုလ်က ကယ်တင်နိုင်ပုံ ၀ိသုဒ္ဓိ ၇ ပါးရည်ရွယ်၍ကျင့်သည်မဟုတ်၊ နိဗ္ဗာန်သာရည်ရွယ်ပုံ ၀ိသုဒ္ဓိ ၇ ပါး ရထား ၇ စင်း ဥပမာပြ ကံကိုအတ္တယူသောရဟန်းတစ်ပါးတရားတော် ပုဏ္ဏသုတ် -၁ သာသနာတော်၏ အနှစ်သာရရှာပုံ ခန္ဓာငါးပါးသည်ကမ်နားသစ်ပင်နှင့်တူပုံ သူများပါးစပ်လမ်းဆုံးမှုဇာတ်သိမ်းပုံ ဆင်သေနှင့်ကျီးမိုက်ဥပမာပြတရားတော် အရိနန္ဒမ၀ထ္ထု ၁ ဆင်သေနှင်. ပုံတရားတော်၊ ခဒိယ ၀နိယ ရေ၀တမထေရ် Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 24 ခင်ရာ မင်ရာမှ တဏှာလာပုံတရားတော် အဆိပ်ရောသည့်ရေမသောက်မိစေရန် တရားတော် သစ္စာလေးပါးတရားတော် နိဗ္ဗာန်သွားလမ်းပြမြေပုံ တရားတော် စိတ် ၁၁ မျိုး ရှုပွားနည်း တရားတော် ရှင်အနုရာဓ ဒိဋ္ဌိနှင့်ဝိစိကိစ္ဆာကိုအသိနှင့်ပထမပါယ်နည်း ရှင်အနုရာဓ ၂ ရှင်အနုရာဓ သစ်ပင်ဥပမာပြတရားတော် ရှင်အနုရာဓအား ဘုရားကဒိဋ္ဌိဝိစိကိစ္ဆာခွာပေးပုံတရားတော် နှလုံးသွင်းမှန်၍ အားထုတ်က နိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံတရားတော် နှစ်ကြောင်းသောတရားဖြင့် နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်နိုင်ပုံ ချည်တိုင်နှင့်ကြိုး၊ ခွေးနှင့်လည်ပတ် Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 25 အာသဝေါတရားလေးပါးပြုတ်သောဥာဏ် ၁ သုဘဒ်ရဟန်းဥပမာပြ၊ သင်္ခါရတရားတော် ချောင် ၁၆ ချောင်ခိုတတ်ပုံ ၀ိပဿနာရှုနေရမည့် ဘာဝေတဗ္ဗအလုပ်ပေးတရား ဖြစ်ပျက်မြင်အောင်လုပ်ခြင်းသည်မဂ္ဂသစ္စာ ကြက်မကြီးဥပမာ အနတ္တလက္ခဏဥာဏ် ခန္ဓာငါးပါးကို မျောက်ဖြင့်ဥပမာပြပုံ ကုသိုလ်ခွေး အကုသိုလ်ခွေး တရားတော် လူ့သံယောဇဉ်စွန့်မှ နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပုံ တရားတော် ပြုံးသေနှင့်မဲ့သေ ကံလေးမျိုးအကြောင်းရှင်းပြပုံ ဘုရားပြောသောစကားနှစ်ခွန်း တရားတော် Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 26 စိတ္တနုပဿနာ သတိပဌာန် သြဃလေးပါးနစ်မြုပ်နေပုံနှင့် ယင်းမှထွက်ပုံ အခေါ်ရှိနှင့်တကယ်ရှိ အရှိနှစ်ပါးခွဲခြားရန် ကာလိကနှိ်ပ်စက်တတ်ပုံနှင့် သန္ဒိဋ္ဌိကောကျေးဇူးပြုပုံ အစေလကဿဖနှင့် ဘုရားအမေးအဖြေ ဝေဒနာနှင့်တဏှာကြားသဗ္ဗညုတဥာဏ်ရ၍ ဘုရားဖြစ်လာပုံ သစ္စာဆိုက်အောင်ပညာနဲ. အကဲခတ်ပါတရားတော် သိမ်မွေ့တဲ့ရုပ်နာမ်ဖြစ်ပျက်ကိုသူစိမ်းပြင်ပြင်၊မြင်အောင်စောင်စောင်ကြည့်ရန် Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 16 ဥဒယဗ္ဗယဥာဏ်ရောက်လျှင်အကျိုးကြီးလှပုံ ဥဒယဗ္ဗယဥာဏ်ရောက်လျှင်အကျိုးကြီးလှပုံ ၃-၃-၅၉ နှင့်တူနေ သေမင်းတံပို့သည့် ဇရာလက်ထဲမှာ ပျော်လျှက်ရှိကြပုံ တရားတော် မာဂဏ္ဍီသုတ် ၉ ။ ပုထုဇဉ်ရဟန်းတပါးအမေးကို ရဟန္တာကြီးလေးပါး ဖြေပုံ အနတ္တက အနတ္တကို အားကိုး ရှာနေပုံ တရားတော် တရားဟောပုဂ္ဂိုလ်နှင့် တရားနာပုဂ္ဂိုလ်တို့ လိုက်နာရမည့် ကျင့်စဉ်တရားတော် အသံမကောင်း ၀ိပဿနာလမ်းမှနိဗ္ဗာန်သွားနိုင်ပုံတရားတော် သညာကြောင်. ကိုကိုယ် စုံစမ်းပါတရားတော် ၂ သစ္စာလေးပါးနှင့် ကထိန်ရေစက်ချ တရားတော် Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 29 ဦးသံဒိုင်သို. . ပွားပါ လူမိုက်နှင့် လူလိမ္မာထူးခြားပုံ စိတ်ကိုလုံခြုံအောင်ထားနိုင်လျှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပုံတရားတော် သာသနာတွင်း သမ္မာဒိဋ္ဌိနှင့် သာသနာပ သမ္မာဒိဋ္ဌိ သမ္မသနသုတ် Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 27 မဂ္ဂင်ဖောင်ဖွဲ.
ဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလ ဟောကြားတော်မူသော Mp3 တရားတော်များ ~ TOGETHER MOBILE
ရမည်တရားတော် အမြင်မှားသောဘေးမသင့်စေရန်တရားတော် စက်ဆုပ်စရာ အသုံးမကျတာအမှန်တရားတော် သောတာပန်ဖြစ်ဖို့နှစ်ချက် ဝေဒနာနုပဿနာ ဥာဏ်စဉ်နှင့် ရှင်းပြထားသည် Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 73 မဂ္ဂင်ဖောင်ပြင်ကြရန်တရားတော် ၁ မဂ္ဂင်ဖောင်ပြင်ကြရန်တရားတော် ၂ သုဓုတန်းကမနေပဲ ဥာဏ်တန်းကနေပါနှင့် ယမမင်းစစ်ခန်းတရားတော့် ဖြစ်ပျက်တွေ့ရင်အသေဆိုးမသေတော့ပါ တရားတော် ဒုက္ခွပေးလေသမျှ ခန္ဓာကဖြစ်ရပုံတရားတော် စင်ကြယ်တဲ့မနောနဲ့မှ နိဗ္ဗာန်မြင်မည်တရားတော် ဒိဋ္ဌိခွာမှုရှေ့ထားကြရန် လောင်စာနှင့်မီး တရားတော် ဒိဋ္ဌိနှင့်ဝိစိကိစ္ဆာသတ်တရားတော် သစ္စာသိမှသံသရာပြတ်ပုံတရားတော် ၁ သစ္စာသိမှသံသရာပြတ်ပုံတရားတော် ၂ Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 74 အကြားအမြင်မရှိသောပုထုဇဉ်နှင့် အကြားအမြင်ရှိသောပုထုဇဉ်တရား ခန္ဓာငါးပါး ကမ်းနားသစ်ပင် တရားတော် နဒီသုတ် ၀ိပဿနာရှုကြရန် အကြိမ်ကြိမ်မှာပုံ စိတ္တာနုပဿနာရှုကြရန် အကြိမ်ကြိမ်မှာပုံ ဒိဋ္ဌိစင်မှ နိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်မည်တရားတော် ကံကိုအတ္တလုပ်ပြီးအားမကိုးသင့်ပုံ သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းနှစ်ပါးတရားတော် ယမကရဟန်းဝထ္ထုတရားတော် ၁ ယမကရဟန်းဝထ္ထုတရားတော် ၂ ကုသိုလ်စစ်ကိုရအောင်ရှာပါ ယမကရဟန်းဝထ္ထုတရားတော် ၃ Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 75 ကံအမိကံအဖမှ ဥာဏ်အမိဥာဏ်အဖသို့ပြောင်းရန် ယမကရဟန်းဝထ္ထုတရားတော် ၄ ပပဉ္စချုပ်ပျောက်ကြောင်း တရားတော် တောင်ကြိတ်ခံရသည်မှလွတ်ရေး ကျွှတ်ရေး လူမိုက်နှင့် လူလိမ္မာအလာခြင်းတူ၍ အသွားခြင်းမတူပုံတရားတော် သဿတနှင့် ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိခွာပုံ အနတ္တထင်အောင်ရှုနည်းတရားတော် တစ်မဂ် တစ်ဖိုလ်ရပုံတရားတော် မဂ္ဂဗြဟ္မစရိယအကျင့်နှင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဖြတ်မှသာ သာသနာတွင်းသားရောက် သံသရာခရီးစဉ်၏ ထွက်လမ်းတရားတော် အာသ၀ချုပ်ကြောင်းတရားတော် ဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှ ၀ိပဿနာရှုရန်တရားတော် Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 76 အကြားအမြင်ရှိသူနှင့် မရှိသူဝေဒနာသုံးသပ်ကြပုံ ဝေဒနာနုပဿနာရှုနည်းတရားတော် နိဗ္ဗာန်ကိုခန္ဓာဖုံးနေပုံ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ ချုပ်ကြောင်းတရားတော် ဦးချစ်လှ + ဒေါ်သောင်းတို့၏သားရှင်ပြု အလှူရေစက်ချ သပိတ်သွတ်လွတ်တရားတော် အပါယ်ရေသောက်မြစ်ဖြတ်နည်းတရားတော် Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 77 Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 78 Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 79 Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 80 Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 81 Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 82 Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 83 ၁။ ၈-၃-၁၉၅၄ နိဗ္ဗန်သည် ဆုတောင်း၍ မရ၊ ကိုယ်တိုင်ပွားယူမှရမည် တရားတော် မှတ်ချက်။ ။ မိုးကုတ်ဆရာတော် page မှကူးယူမျှဝေပေးပါသည်။. ဟာ ဘုရား သာဝကလား ဘုရား ဟော မှသံသရာက ကျွတ်မှာလား. ကိုကိုယ် စုံစမ်းပါတရားတော် ၁ သမ္မသနသုတ် ကိုယ်. ငရဲဒုက္ခွများအကြောင်းတရားတော် စိတ်အပြင်မထွက်မိအောင်သတိထားကြရန် ဇနပဒကလျာဏီသုတ် ၀ိပဿနာဥာဏ်နှင့် မဂ်ဥာဏ်ခွဲခြားသိရှိကြရန် မဟာတဏှာသင်္ဃယသုတ် ဒိဋ္ဌိသုံးပါးကွာရေး တရားတော် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာရှိနေတတ်သည့် ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်နည်း ဇာတိ၊ဇရာ၊ဗျာတိ၊မရဏ တို. ဆရာတော် ဘုရားကြီးများ ၏ တရားတော်များ တရားပေါင်း မြောက်များစွာ ကို အောက်က လင်. သွားရာ သင်္ခါရလောကနှင့်သတ္တလောကရှင်း တရားတော် သဿတ ဥစ္ဆေဒ ကင်းစင်ရေးတရားတော် သဿတ ဥစ္ဆေဒ သိမှုနှင့်ပြုတ်ရေးတရားတော် အမှတ်မှားကြောင့်ကျန်အမှားတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပုံ Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 47 ခိုကိုးရာ အားထားရာ မှီခိုရာအစစ်ရှာသင့်ကြောင်း သာသနာတွင်းတရားနှင့်သာသနာပတရား အခြားအရေးထက်ငရဲမျိုးစေ့ဖြုတ်ရေးကပို၍အရေးကြီးပုံ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော် ၀ဋ်သုံးပါးလည်ပုံ သစ္စာသိမှနိဗ္ဗာန်ရပုံ ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ကြောင်း လမ်းခွဲရှာရန် တရားတော် ကံပြတ် ၁ တရားတော် ကံပြတ် ၂ တရားတော် ကမ္မဿကတသမ္မာဒိဋ္ဌိနှင့် ၀ိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိ ခြားနားပုံ လူ့သံယောဇဉ်စွန့်ပြီးမှ တရားအားထုတ်ကြရန် Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 48 နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရား မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသည် ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပုံ ဒိဋ္ဌိခွာနည်း တရားတော် နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရား ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရေးတရားတော် ၁ ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရေးတရားတော် ၂ အနိစ္စာဝတသင်္ခါရာရှင်းပုံ ဒိဋ္ဌိဖြုတ် တရားတော် နိဗ္ဗာန်လိုချင်လျှင် အလုပ်နှစ်လုပ်ပဲလုပ်ပါ ရန်သူနှစ်ယောက်ကိုအသေသတ်နည်း တရားတော် ခန္ဓာတွေပြန်ရနေခြင်းအကြောင်း Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 49 အလုပ်စဉ် ၀ိပဿနာ တရားတော် ဖြစ်ကောင်းသော၊မဖြစ်ကောင်းသော တဏှာ မာန တရားတော် အာထုတ်နည်းသုံးမျိုးအကြောင်း ဥာဏ်သုံးပါးခွဲပြပုံ လုပ်ငန်းအစနှင့်အဆုံးကိုပြသည့် တရားတော် ကိုယ့်ကိုကိုယ်သုံးသပ်နည်း တရားတော် ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးခွဲခြားပြခြင်း မာဂဏ္ဍီပရပုဇ် ၀ထ္ထု ၁ မာဂဏ္ဍီပရပုဇ် ၀ထ္ထု ၂ မာဂဏ္ဍီပရပုဇ် ၀ထ္ထု ၃ မာဂဏ္ဍီပရပုဇ် ၀ထ္ထု ၄ Please use Nero Cover Design Software and Win-Taungyi Myanmar Font Mp3 Disc 50 ရှင်အာနန္ဒာသောတာပန်တည်ပုံ ၀ိပဿနာလုပ်မှဒိဋ္ဌိပြုတ်မယ်တရားတော် မာဂဏ္ဍီဝထ္ထု အရိယာမျက်လုံးအရေးကြီးပုံ သုညတ တရားနာရမှ သုညတနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပုံ ဒီခန္ဓာစွန့်ပြီးနောက်ခန္ဓာရခြင်းသည် အရေးကြီးဆုံးအပြစ်သင့်ပုံ ကိလေသာဖယ်နည်းနိသျှည်း လောင်စာသိမ်း၍မီးငြိမ်းရန် ၀ိပဿနာရှုနည်း လူမိုက်နှင့် လူလိမ္မာ၊မဂ္ဂဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကြောင်. .